लोकतान्‍त्रिक गठबन्धनमा बाँंटफाँटको किचलो
किरण दहाल/राजु स्याङ्तान शुक्रवार, आश्विन २७, २०७४
कसले पो सोचेको थियो र, कांगे्रससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अचानक एमालेको पल्लु समाउला ? अझ नयाँशक्तिले पनि माओवादीकै फेरो समाएर सूर्य चिह्नमै चुनाव लड्ने अर्को परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । तर, सबैलाई चकित तुल्याउँदै १७ असोजमा एकाएक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको लागि चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणसमेत गर्न सकिने वामगठबन्धन घोषणा गरियो । यो घोषणाले लोकतान्त्रिक धारमा खैलाबैला मच्चियो । लोकतान्त्रिक धारले पनि रातारात बृहत गठबन्धन बनाउने कसरत शुरु गर्‍यो ।
संसदीय अभ्यासमा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टीहरूले तालमेल गर्नु नौलो कुरा हैन । स्थानीय निकायको चुनावमा पनि माओवादी र कांग्रेस तालमेल गरेरै अघि बढेका थिए । चुनावको सन्निकटमा गठन भएको वाम गठबन्धनले नेपालको राजनीतिक बहसलाई नै मोडिदियो ।
वाम एकतापछि कांग्रेस लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । उसले राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (प्रजातान्त्रिक) सँग छलफल जारी राखेको छ । यसका लागि विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ । तर, तालमेल गरेर जाने वातावरण धेरै अघि नबढेको बताउँछन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ । भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर अघि बढ्ने कुरा उठे पनि आन्तरिक गृहकार्य परिपक्व भइसकेको छैन । यसलाई उपलब्धि नै मान्नु हतारो हुन्छ ।’
अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटमध्ये कुन दलले कति पाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको गुरुङ बताउँछन् । सिट संख्या टुंगो लागेपछि मात्रै नजिकिँदै गरेको चुनावमा को/कसरी उपस्थित हुन्छन् भन्ने थाहा हुनेछ ।
यो गठबन्धन प्रचण्डको चातुर्यता, ओलीको ‘रिअलाइजेसन’ र देउवाको ‘लेजी पोलिटिक्स’ले निम्त्याएको हो। तुलनारायण साह राजनीतिक विश्लेषक
दुई ठूला वाम पार्टीहरू एक भए राजनीतिमा कांग्रेसले ठूलो धक्का बेहोर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले, कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धनमार्फत चुनावमा जान खोज्दैछ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार सिट संख्या मागिरहेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकले तालमेल गरेर अघि बढ्न २० सिटको माग गरेको छ । उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘मिलेर जाने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । अब सिट संख्यामा टुंगो लाग्न बाँकी छ । गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ तालमेलकै लागि कार्यदल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छुट्टै छलफलसमेत भइरहेको छ । तालमेल गरेर अघि बढ्न निरन्तर कार्यदलको बैठक बसिरहेको बताउँछन्, कार्यदलका एक सदस्य तथा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य बुद्धिमान तामाङ । अवधारणापत्र, घोषणापत्रजस्ता विषयमा पनि छलफल भइरहेको र चाँडै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘न्यूनतम चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेर जाने योजना बन्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा कसले कति सिट लिने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’
प्रदेश २ को ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले २४ सिट पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । उसले सातै प्रदेशमा जम्मा ५५ सिटको दाबी गरिरहेको छ । पटक–पटक वार्ता गरिरहेको कांग्रेस उनीहरूको यो मागबाट तर्सिएको छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो भोट बैंकका रूपमा पनि प्रदेश २ लाई लिएको छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसले उक्त प्रदेशमा ४० तह जितेको थियो भने संघीय समाजवादी फोरमले २६ र राजपाले २५ ठाउँमा बाजी मारेका थिए ।
दुई पार्टीको चर्को मागदाबीले मिलेर जाने कि नजाने भन्नेमा कांग्रेसमा द्विविधा बढेको छ । आफूलाई पनि प्रदेश २ मा सहज ठानेको कांग्रेस यति धेरै सिट दिने कि नदिने दोधारमा देखिन्छ । दुई पार्टीसँग सिट संख्यामा कुरा नमिलेपछि सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको देख्छन्, केन्द्रीय सदस्य गुरुङ । राजपा र फोरमको अधिकतम माग भएकाले बाँडफाँटमा कुरा नमिलिरहेको उनी बताउँछन् । अन्य दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्नेभन्दा कांग्रेस एक्लै चुनावमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको जोड छ । भन्छन्, ‘अन्य दलसँग मिल्नेभन्दा पनि कांग्रेस एक्लै चुनावमा उपस्थित हुनुपर्छ ।’
वाम गठबन्धनको सिको गरेजस्तो देखिने लोकतान्त्रिक दलहरूको मिलेर जाने कुरा अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वाम पार्टीहरू सिट संख्यामा पुगेर अल्झिएका छन् भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि त्यहीँ पुगेर अल्मलिएको छ । राजनीतिक परिस्थितिले गठबन्धनसहित अघि बढ्नु परेको चौधरीको भनाइ छ । स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयको लागि तालमेल गर्नुपरेको उसको मत छ । त्यसो त फोरम लोकतान्त्रिक र कांग्रेसबीच पार्टी नै एकीकरण गरेर जाने हल्ला पनि नचलेको हैन । तर, अहिले आफूहरूको ध्यान पार्टी एकीकरणभन्दा गठबन्धनलाई सफल तुल्याउनु रहेको गुरुङ बताउँछन् ।
सरकारमा संग्लग्नताको कुरा
वाम एकतासँगै कांग्रेस अन्य साना दलहरूसँग मिलेर चुनावमा आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहन्छ । विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरण हुने कुरा पनि नचलेको हैन । तर, सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो आफूहरू कांग्रेसमा जाने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउँछन्, फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरी । भन्छन्, ‘एकीकरण गर्ने कुरा सधैं सम्भावनाको विषय भयो । तर, हामीले यो सम्बन्धमा अहिले कुनै पनि कुरा उठाएका छैनौं । हाम्रो छलफल तालमेलमा मात्रै सीमित हो ।’ यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक मात्र हैन, राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन जनाए पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरामा भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
अन्य दललाई सरकारमा ल्याउन सके माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेसलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन । तर, गठबन्धनमा आउने सबै दल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम देखिन्छ । उपेन्द्र यादवले आफू सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् । राप्रपा पनि सरकारमा गइहाल्ने मनस्थितिमा छैन । अहिले आफूहरूले सरकारलाई समर्थन मात्र गरेको तर सरकारमा जाने मनस्थिति नबनाएको राप्रपाका प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘देउवा सरकारलाई हाम्रो समर्थन मात्र छ ।’
यसरी हेर्दा अहिले तत्काल सरकार पुनर्गठनको सम्भावना देखिँदैन । चुनावको मुखमा माओवादीबिना नै अन्य पार्टीलाई रिझाएर सरकार चलाउन कांग्रेसलाई पनि गाह्रो देखिन्छ ।
वाम पार्टीहरू एकत्रित भएर चुनावमा आउँदा त्यसबाट कांग्रेसले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने धेरैको अनुमान छ । यसलाई चिर्न भए पनि उसले साना दलहरूसँग मिलेरै चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यसका लागि लगातार कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । केपी ओलीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर स्थायी राजनीतिको शुरुवात गर्ने बताइरहँदा कांग्रेस झस्किनु स्वभाविक पनि हो । तर, चुनावमा सहभागी हुन तालमेल गरेर जानु नहुने तर्क राख्छन्, धनराज गुरुङ । ‘अरू दल कुन–कुन शक्तिको दबाबमा परेर तालमेल गर्छन् । अनि हामीले पनि तालमेल गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने छैन, उनले थपे, ‘हाम्रो पनि देशैभरि राम्रो माहोल छ । तालमेलको खासै जरुरी छैन ।’ प्रदेश २ मा पनि कांग्रेसको वातावरण राम्रो भएकाले ठूलो संख्यामा अन्य दललाई सिट दिन नहुने उनको तर्क छ ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धन पार्टीको अस्तित्वको लागि नभई राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको बुद्धिमान तामाङको भनाइ छ । कांग्रेसले राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग पूरा गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । निर्वाचनसम्मका लागि गठबन्धन भएको उनको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक पार्टीहरूसँग केही मुद्दामा सहमति गरेर कांग्रेस आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न खोजिरहेको छ ।
मुख्य रूपमा तनावमा रहेको राजपा र फोरमको ५५ सिटमा पनि सहमति भएर अघि बढ्ने कुरामा ढुक्क छन्, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट सिट निर्धारण कार्यदलका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल । भन्छन्, ‘हामीले सबै दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सबैसँग कुरा मिल्छ र हामी चुनावमा सँगै जान्छौँ ।’
पछिल्लो धु्रवीकरणबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई स्वभाविक परिघटनाका रूपमा लिएको देखिन्छ भने कतिले उत्तर र दक्षिणको खेलको रूपमा चित्रण गरेका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भने यसलाई स्वभाविक घटना मान्छन् । ‘यो गठबन्धन प्रचण्डको चातुर्यता, ओलीको ‘रिअलाइजेसन’ र देउवाको ‘लेजी पोलिटिक्स’ले निम्त्याएको हो ।’
गठबन्धनले साना पार्टीहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने देख्छन्, उनी । दुई ध्रुवमा नेपालका दर्जनौं पार्टी धु्रवीकृत भए पनि राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी र पहिचानको मुद्दा भने ओझेल पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विश्लेषक साह हिजोको वर्चश्वशाली शक्ति नै पुनः मूलधारमा अगाडि आउने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हिजो राज्य र राजनीतिमा हालिमुहाली गर्ने समुदाय नै अगाडि आउँछ । सीमान्तकृतहरू झनै सिमानामा धकेलिनेछन् ।’